मौरी चराउने किसानको आम्दानी वार्षिक रु ३० लाख
प्रीति बाट युनिकोड | युनिकोड बाट प्रीति
रासस/गोपालप्रसाद पोखरेल प्रकाशित: २०७४-९-१८ गते | 2137 पटक हेरिएको
मोरङ । तपाईले गाईभँैसी चराएको त देख्नु वा सुन्नु भएकै होला, तर किसानले मौरीसमेत चराउँछन् भन्दा तपाईलाई पत्यार नलाग्न सक्छन् ।
तर यो कुरा सत्य हो । मोरङको रंगेली–३ स्थित रञ्जनीका किसान यमनाथ पाठकले मौरी चराउने गर्नुभएको छ ।
आफैँले र छर छिमेकीले लगाएको तोरी ढकमक्क फुलेपछि मौरीको घार नै बोकेर उहाँले चराउँदै आउनुभएको छ । तोरी नफुल्ने समयमा समेत उहाँले जंगलमा लगेर मौरी चराउने गर्नुभएको छ । रञ्जनीमा पाथीभरा मौरीपालन उद्योग स्थापना गरेर पाठकले मौरी पालन गर्दै आउनुभएको छ ।
खडानन्द खनालका अनुसार चार बिगाहामा तोरी खेती गरेको र प्रत्येक वर्ष मौरी चराउन ल्याउन आग्रह गर्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । पहिले तोरीमा लाइ लाग्ने, किरा लाग्ने गरेको र परागसेचनको काम मौरीले नै गरेको हुनाले मौरीको घारै बोकेर तोरी खेतीमा ल्याएर चराउने गरेको पाठकको भनाइ छ । मौरी ल्याएपछि आफूले तोरीमा विगत चार÷पाँच वर्षदेखि कुनै पनि कीटनाशक औषधिको प्रयोग नगरेको र बिगाहामा २० मनदेखि २२ मनसम्म तोरी उब्जनी हुने गरेकोसमेत खनालको भनाइ छ ।
२०६० सालदेखि मौरीपालनमा लागेका यमनाथ शुरुका दिनमा चार घारबाट मौरीपालन शुरु गर्नुभएको हो । अहिले २०० घारसम्म पाल्न सफल हुनुभएको छ । उहाँले एक घार बराबर ५० हजारदेखि ६० हजारसम्म मौरी हुने गरेका छन् ।
वार्षिकरुपमा २०० घारबाट पाँच हजार केजीअर्थात् (५० क्विन्टल) मह वार्षिक उत्पादन हुन्छ भने रु ३० लाख बराबरको आम्दानी हुने गरेको समेत पाठकको भनाइ छ । पाथीभरा मौरीपालन उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन गरेको महप्रति केजी रु ६०० को दरले बिक्री वितरण गर्ने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
सावधान ! दशैंमा धेरै रक्सी खाँदा गयो ज्यान
निर्मला पन्तको गाउँमा दशैं खल्लो, प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरू रमाइलो गर्दै
यी डाक्टरले गरे ओली सरकारलाई असफल घोषणा, बताए प्रचण्डदेखि माधव नेपालको विवरण
दशैंका बेला कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीले निकाले जनता ढाँट्ने नयाँ उपाय !
दशैंका अवसरमा सामूहिक भोज
मोदीखोलाको उत्पादन पूर्ण क्षमतामा
चितवनमा सडक दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते
सुन तस्करीको ‘ठूलो माछा’ प्रधानमन्त्री नै भएको खुलासा !
चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रचण्डलाई समय छैन स्वदेश फर्कनुस् भनेपछि...
आफै फस्ने देखेपछि सुन तस्करीको अनुसन्धान रोक्ने अाेलीको निर्णय, गृहमन्त्री रिसले क्रुद्ध
निर्मलाको लागि न्याय माग्दै सांसद नविना लामाले मागिन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा !
देउवाको पालामा एकपटक पेट्रोलको मूल्य बढ्दा उफ्रिने नविना लामा ओलीले ५ पटक बढाउँदा कता?
खानले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भने, सुशील कोइराला जस्तै बन्ने प्रयास गर्नेछु !
यी हुन् सरकारी खर्चमा फाइभस्टार होटेलमा फूटवल हेर्ने कम्युनिष्ट मन्त्रीहरु !
Tweets by NepalPana
घट्यो सूनको मुल्य, अति पुग्यो?
काठमाडौं । आइतबार सूनको मुल्य घटेको छ । सूनको मुल्य तोलामा २ सय रुपैयाँले घटेको हो । अघिल्लो दिन ६० हजार रुपैयाँ प्रतितोला रहेको सूनको मुल्य आइतबार ५९ हजार ड सय कायम गरि..
सून पाँच वर्षयताकै महंगो, दशैंको समयमा किन बढ्यो मुल्य?
काठमाडौं । सूनको पछिल्लो समय पाँच वर्षयताकै महंगो भएको छ । शुक्रबार र शनिबार सूनको मुल्य प्रतितोला ६० हजार रुपैयाँ रहेको सूनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।..
५ सय प्रतिशतसम्म नाफा खाने कोरियन सपमा सिलबन्दी
काठमाडौं । उपभोक्ताबाट चर्को मुल्य लिएर व्यापक ठगी गर्दै आएको जमलको द कोरियन सपमा सिलबन्दी गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्तासँग चर्को मूल्य ल..
पशुपन्छी मन्त्रीले भने काठमाडौंमा राँगाँको मासु नखानुस्
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले काठमाडौं उयपत्यकामा हुने गरेको राँगाको मासु खान योग्य नरहेको बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा राँगाको मासु ध..
सम्पर्क नम्बर : ९८१८२८४९१४
सुचना बिभाग दर्ता नम्बर : १४/०७३/०७४
सम्पादक : भगवान मिश्र
धर्मराज मिडिया ग्रुप प्रा.लि द्वारा सञ्चालित
केन्द्रिय कार्यालय: बालुवाटार, काठमाँडौ ।
Copyright Dharmaraj Media Group , All Rights Reserved
School of Information Technologies (School of IT)